SAROKAR: कोलकाता वार्ताःमोर्चाले लियो ठूलो उपलब्धीको रूपमा
कोलकाता वार्ताःमोर्चाले लियो ठूलो उपलब्धीको रूपमा
कालेबुङ, 25 मार्चः जीटीएको सिमानाको निम्ति राज्य सरकारसित कुरा ठामठिम मिलाए पनि गोजमुमोलेे आजसम्म पनि आइतबारे कार्यक्रमस्वरूप जुलुस अनि जनसभाको क्रम यथावत राखेको छ।
आज कालेबुङमा भएको आइतबारे कार्यक्रमको जनसभालाई केन्द्र गर्दै मोर्चा मिडियामाथि खनियो। हिजोको कोलकाता वार्ताको मिडियाले सही रिपोर्ट नदिएको आरोप मोर्चाले लगाएको छ। हिजो कोलकाताको बैठकलाई मोर्चाले ठूलो उपलब्धीको रूपमा लिएको छ। तर केवल दागोपाप क्षेत्रलाई लिएर नै चुनाउ गराउन मोर्चा सहमत भएको एक दैनिकमा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै मोर्चा केन्द्रिय सह-सचिव विनय तामाङले उक्त समाचार निराधार रहेको बताउँदै तिनी मीडीयाकर्मीहरूमाथि बर्सिए। यसैअवधी तिनले हिजोको बैठकको मिनट पनि जनसाधरणलाई पढेर सुनाउँदै मिनटमा उल्लेखित कुराहरू जनसाधरणलाई बताए।
पत्रिकाहरूमा वास्तविकता प्रकाशित नगरेको भन्दै तिनले पूर्व न्यायधिश श्यामल सेनको नेतृत्वमा गठित हाइपावर कमिटीले जून महिनाको प्रथम सातामा पहिलो रिपोर्ट बुझाउने भएको बताए। कोलकाता वार्ताको मिनटअनुसार हाइपावर कमिटीको निर्णयलाई राज्य अनि मोर्चा दुवै पक्षले स्वीकार्नुपर्ने भएको छ। तिनीअनुसार हाइपावर कमिटीको पहिलो रिपोर्टअनुसार जुन-जुन मौजाहरू जीटीएमा अन्तर्भुक्त हुन्छ त्यही मौजाहरूलाई लिएर जीटीएको चुनाउ सम्पन्न हुनेछ। त्यसपछि जुन-जुन मौजाहरू जीटीएमा अन्तर्भुक्त हुँदन ती क्षेत्रहरूबाट5जनालाई जीटीएमा मोनिनित सद्‌स्यको रूपमा लिइनेछ। पछिबाट हाइपावर कमिटीको दोस्रो रिपोर्टपछि अन्य मौजाहरू जीटीएमा समावेश गरिने भएको छ। ‘हाइपावर कमिटीको पहिलो रिपोर्टको आधारमा जून महिना अथवा जुलाई महिनामा जीटीएको चुनाउ हुने भएकोले यहॉं दागोपाप क्षेत्रभित्र चुनाउ हुन्छ भनेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैन’-तामाङले भने।
आजको जनसाभालाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा प्रवक्ता एवं विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले आजको जुलूस अनि जनसमाभा जनसधारणको निम्ति राजनैतिक व्यायाम रहेको बताए। तिनीअनुसार जीटीएको कुरा ठामठिम भएकोले जुलूसको आवश्यकता पर्दैन तरैपछि समर्थकहरूलाई व्यायाप दिइरहनुपर्छ। हाइपावर कमिटीले जून महिनाको प्रथम सातामा पहिलो रिपोर्ट बुझाउने निश्चित हुनु नै मोर्चाको निम्ति ठूलो उपलब्धी रहेको तिनले बताए। अहिलेसम्म कयौंपल्ट आफूहरूले हाइवपावर कमिटीले चॉंडौ रिपोर्ट बुझाओस्‌ भनेर भन्दा नभएको कुरा विमल गरुङले कोलकातामा हिजो बैठक गर्दा सम्भव बनेको पनि तिनले बताए। मोर्चाले हिजोको बैठपछि ठूलो एउटा पहिलो लडाइ जितेको पनि तिनले दावी गरे।
यदि हाइपवार कमिटीले झुटोे रिपोर्ट बुझाए मोर्चासित गोर्खाबाहुल क्षेत्र अनि दावी गरिएको मोठ 398 वटा मौजाहरूको विस्तृत रिपोर्ट रहेकोले मोर्चाले यस्तो अवस्था आइपरे पनि तर्क राख्नसक्ने डा. छेत्री ठोकुवा गरे। यसैअवधी तिनले आज राष्टपतिले संसद भवनमा जीटीएको कुरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री अनि राष्टपतिसम्मले गोर्खाहरूको निम्ति जीटीएमाथि कुरा गर्नु पनि महत्वपूर्ण विषय रहेको तिनले जनसभालाई सम्बोधन गर्दै भने। तिनीअनुसार तराई-डुुवर्सबाट आएको 736 मतमध्ये7सय भन्दा अधिक मत जीटीएको पक्षमा रहुनु पनि दावी गरिएको तराई-डुवर्सको मौजाहरू जीटीएमा गाभिने तय रहेको पनि मोर्चाले दावी गरेको छ।
युवा मोर्चाको तत्वधानमा आयोजित आजको जुलूलमा कालेबुङ नगरदेखि बाहिरका विभिन्न समष्टिका मोर्चा समर्थकहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। जुलूसले नगर परिक्रमा गरेपछि डम्बरचोकमा आएर परिणत भएको जनसभा अवधी मोर्चा महकुमा समिति अध्यक्ष सरिता राई, मोर्चा केन्द्रिय समिति सदस्य विजय सुन्दास, युवा मोर्चा महकुमा समिति सचिव निमा तमाङ, आदि प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए।
0 comments: on "कोलकाता वार्ताःमोर्चाले लियो ठूलो उपलब्धीको रूपमा"